Peony Sorbet: फूल को लक्जरी सुन्दर मध्य अवधि
भव्य herbaceous peony डच चयन नाम Sorbet - Ornamental बाली लोकप्रिय रूसी उत्पादक को एक। यो लक्जरी बिना बगैचा कल्पना गर्न असम्भव छ यो, उत्कृष्ट सुन्दर, पनि सबैभन्दा गम्भीर भू-भाग embellish र organically पार्क वा मा फिट सक्षम घरेलु भित्री। यसको सुरुचिपूर्ण laconic सौन्दर्य प्रसिद्ध डिजाइनर र साईट माली लोकप्रिय संग Sorbet Peony। उहाँले नयाँ कुनै कम अचम्मलाग्दा प्रजातिहरू संग competes। यो बोट को विवरण र यसको खेती खेती अभ्यासहरू यस लेखमा सम्बोधन।
Peony Sorbet: विवरण
संकुचित झाडी फूल को औसत सर्तहरू।, 0.9 उचाइ मा मिटरसम्मको बढन टेरी तन्तु नाजुक गुलाबी र क्रीम रंग mesmerizing, मध्य-जुन मा blooming, एक शक्तिशाली rhizome र व्यास 16-18 सेमी पुग्न ठूलो फूल सामना गर्न मजबूत बलियो peduncles संग Undemanding बारहमासी। एक संस्कृति को फूल, एक peony sorbet रूपमा असामान्य छ: तीन तह, यसलाई विभिन्न आकारहरू को concave lobes पङ्क्ति एकान्तरण को अप गरेको छ। भव्य फूल ताजा एक धनी सुगन्ध सँगसँगै - मूल कार्ड प्रजातिहरू।
मात्र सजावटी फूल shrub, बाक्लो, बलियो मा घुम्रेको dissected पात उत्कृष्ट फारम फूल पछि र कायम, बिस्तारै शरद ऋतु बैजनी गर्न रसीला गर्मी साग परिवर्तन stems।
प्राथमिकता र खेती संस्कृति को कृषि प्रविधी
Zavidnaya धीरज pions सजिलै तापमान र हिउँ-मुक्त जाडो उत्कृष्ट कुनै पनि संरचना को soils मा बढ्न र पोषण प्राप्त बिना ब्लूम सक्नुहुन्छ को तेज परिवर्तन स्थानान्तरणका तिनीहरूले चिसो उच्च प्रतिरोध अधिकार, ज्ञात छ। यी सबै गुणहरू पूर्णतया peony sorbet चिनारी हो, तर उर्वर soils एक उदार र शानदार ब्लूम प्रदान गर्नुहोस्।
प्रकाश-आवश्यकता, र लगाए यस संस्कृति खुले सूर्य क्षेत्रमा एक तटस्थ प्रतिक्रिया संग loam संग राम्ररी fertilized, यो पहिलो फूल तेस्रो वर्ष पहिले नै चकित हुनेछ। अक्सर, peony sorbet को rhizomes विभाजन गरेर प्रचारित छ। अगस्ट र सेप्टेम्बर - लागि यो सबै भन्दा राम्रो समय। मानक delenki को rhizome टुक्रा र केही मार, जो वर्तमान 3-4 अन्तस्करणले को वृद्धि हुनुपर्छ। Delenki मानक आकार मा प्वालहरू रोपण मा लगाए, compacted माटो (utaptyvaya छैन!), राम्ररी पानी।
जाडो धरण गीली, sawdust वा अन्तर्गत युवा peony काठ चिप्स, विशेष सामाग्री, स्प्रूस lapnikom, छत सामाग्री ढाकिएको छन्। संस्कृति को undisturbed वृद्धि रूपमा हटाइएको प्रारम्भिक वसन्त इन्सुलेशन को आगमन संग, बित्तिकै सूर्य न्यानो सुरु रूपमा। वयस्क संस्कृति अन्य shelters मा आवश्यक छैन। हिउँदमा, सबै peony जमीन pyatisantimetrovym सन छोडेर कटौती गर्दै stems।
सादगी र साँच्चै अद्वितीय संस्कृति धीरज अचम्मको, मायालु गतिविधिहरूको पनि पूर्ण कमी आफ्नो उज्ज्वल blooms रोकिनेछ किनभने छैन। तर एकदम निश्चित हेरविचार आवश्यक एक झाडी अन्तर्गत सजावटी प्रभाव, त्यसैले आवधिक हजारी, weeding र माटो loosening बढ्छ। संयंत्र खुवाउनुभयो छैन पहिलो दुई वर्ष, माटो मा खाना अवतरण मा प्राप्त किनभने, उहाँले अभाव छैन। वसन्त र शरद ऋतु मा: तेस्रो वर्ष देखि, को peony दुई पटक सिजन आपूर्ति गर्न छ। वसन्त fertilizing गुणस्तर बढ्न गर्न बिरूवा जैविक पुस। र फूल पछि फस्फोरस-पोटासियम मल सांस्कृतिक कपडा को बलियो बनाउँछ लागि आवश्यक बनाउन। साथै, नियमित पानी, धेरै यस्तो संस्कृति, एक peony sorbet रूपमा स्वागत weeding र झाडी मुनि जमीन hoeing। समीक्षा माली, आफ्नै उद्यान यो क्रमबद्ध खेती, उनि एकमत छन्। ती सबै पनि न्यूनतम हेरविचार संग, बोट को अचम्मलाग्दा सौन्दर्य जोड।
Haworthia: घर मा हेरविचार। houseplants
उपयोगी प्याज के हो
सल्लाह र सिफारिसहरू दिन बोटहरू चयन
साहस को शीर्ष मनोवैज्ञानिक टकराव
हामी बच्चा लाभ प्राप्त
ध्वनि कंपन। व्यावहारिक आवेदन। मानव मा प्रभाव
लियोनिद Kharitonov - ठूलो प्रतिभा र शुद्ध प्राण को एक अभिनेता
Glazunov इल्या। मिलाउ गर्न सक्ने तस्वीर
तपाईं नै braids चुल्ठो गर्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ केही सजिलो छ